Ciyaaraha – Page 50 – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
Roberto Firmino oo loogu Yeeray Xulka dalka Brazil si uu badal ugu Noqdo Kaka
Weeraryahanka kooxda Liverpool Roberto Firmino ayaa loogu wacay xulka dalka Brazil si uu badal ugu noqdo laacibkii Hore ee kooxda ac Milan Kaka oo dhaawac uu soo gaaray ka hor kulankii ay kooxdiisa ciyaaraysa maalintii sabtida. Kaka ayaa seegay kulankii ay kooxdiisa Orlando City’ ay barbaraha la gashay kooxda Real Sale Lake furitaanka horyaalka dalka MLS-ka dalka Mareykanka oo dhawaan ...
Jorge Fossati.:- Edinson Cavani Haku Biiro kooxda Manchester City
Macalinkii Hore ee xulka dalka Uruguay Jorge Fossati Ayaa ugu baaqay weeraryahanka kooxda Paris Saint-Germain Edinson Cavani in uu ku biiro kooxda Manchester City ee Horyaalka dalka Ingiriiska. Weeraryahankii Hore ee kooxda Napoli ayaa ah dooqa labaad ee dhanka iyo weerarka kooxda Paris Saint-Germain madaama kooxda weerarka hore uu u safto weeraryahanka heerka caalami ee xulka dalka Sweden Zlatan Ibrahimovic. ...
Arsene Wenger oo amaanay goolhaye David Ospina
Macalinka kooxda arsenal Arsene Wenger ayaa amaan u jeediyay goolhayihiisa David Ospina kadib fursado uu badbaadiyay kulankii Tottenham ay barbaraha la galeen sabtidii. Goolhayaha heerka caalami ee xulka dalka Colombia ayaa mar kale la filayaa in uu kusoo bilowdo kooxda arsenal kulanka ay la ciyaari doonaan kooxda Hull City ciyaarta ku celiska Fa Cup-ka kadib dhaawac soo gaaray Petr Cech. ...
Dhageyso” Barnaamijka Faaqidaada Ciyaaraha Radio Simba
Dhgeystayaal kusoo dhawaada Barnaamijka Ciyaaraha Radio Simba ee Magaalada Muqdisho waana Duhurnimo isniin ah Tariikdana ay ku beegan Tahay 7-3-2016 Ciyaaraha 07-03-2016
Dhgeystayaal kusoo dhawaada Barnaamijka Ciyaaraha Radio Simba ee Magaalada Muqdisho waana Duhurnimo axad ah Tariikdana ay ku beegan Tahay 6-3-2016 cayaaraha duhur 6-3-2016
David Seaman :- Arsenal Waa in ay ku Guuleysataa Horyaaka Ingiriiska
Xidigii Hore ee kooxda Arsenal David Seaman. Ayaa tilmaamay in macalinka kooxda arsenal loogu baahan yahay in uu koobka Premier League uu la qaado kooxda. David Seaman oo kamid ahaa xidigii arsenal kula guuleystay Horyaalka dalka Ingiriiska sanadihii 1997-1998 iyo 2001-2002 ayaa sheegay in naadiga mar kale loogu baahan yahay ku guuleysiga koobka Premier League tan iyo markii ay unbeaten ...
Luis Van Gaal oo kasoo Horjeystay Sameynta Koobka European Super League.
Macalinka kooxda Manchestr United Louis van Gaal ayaa kasoo horjeystay wararka sheegaya in la abuurayo koob cusub oo loogu magacdarayo European Super League. Wararka soo baxaya ayaa tilmaamaya in agaasimayaasha kooxaha Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City iuo Manchester United ay dhamaan ay la kulmeen billionaire reer Mareykan ee lagu magacaabo Stephen Ross’ waxayna kawada hadleen sidii loo sameyn lahaa koob cusub ...
Dhgeystayaal kusoo dhawaada Barnaamijka Ciyaaraha Radio Simba ee Magaalada Muqdisho waana Duhurnimo sabti ah Tariikdana ay ku beegan Tahay 5-3-2016 Ciyaaraha 05-03-2016
Wenger:- Arsenal Waa in ay Guul ka Gaartaa kooxda Totenham
Macalinka Kooxda Arsenal Arsene Wenger ayaa xaqiijiyay in ay kooxdiisa diyaar u tahay in ay guul ka gaarto kooxda Totenhan kulanka galabta ka dhacaya garoonka White Hart Lane ee woqooyiga Magaalada London. Kooxda Arsenal ayaa lix dhibic ka hooseesaysa kooxda Hogaaminaysa horyaalka dalka ingiriiska ee Leicester City ka hor kulanka ay galabta ay la ciyaari doonto kooxda kaalinta Labaad ee ...
Dhgeystayaal kusoo dhawaada Barnaamijka Ciyaaraha Radio Simba ee Magaalada Muqdisho waana Duhurnimo khamiis ah Tariikdana ay ku beegan Tahay 3-3-2016 Ciyaaraha 03-03-2016